Preface – Min Thayt
Min Thayt August 27, 2019 August 27, 2019
ကလောင်သွားထက်ထက် လူငယ်စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရှိသည်။ ဆရာက မန္တလေးသား။ ဆရာ့အမည်ရင်းက အောင်ကိုကိုတိုး။ ဆရာ့ ကလောင် အမည်က ”မင်းသေ့” ဆရာမင်းသေ့ကို စသိတာကတော့ ”နိုင်ငံရေးဖတ်စာများ” စာအုပ်မှ ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်၌ စာအုပ်ဆိုင် ရောက်တော့”နိုင်ငံရေးဖတ်စာများ” ဟူသော စာအုပ်ကို ကောက်ကိုင်မိသည်။ အဲ့ဒီမှာ သူနဲ့စပြီး မျက်လုံးချင်း ဆုံမိသည်။ သူဆိုသည်မှာ တခြားမဟုတ်။ စာရေးဆရာ ”မင်းသေ့"...
လူများ အမူအကျင့်များ အယူအဆများနှင့် ချဉ်းကပ်ခံယူမှုများ သင့်နော် သမိုင်းကြောင်းတစ်လျောက် ပါဝင် စီးမျောခဲ့ကြ သည့် ကိစ္စပေါင်း အသင်္ချေ အနန္တရှိသည့်အနက် လူ့ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ထွန်းပြီးပါမှ သမိုင်းတင်ခဲ့ကြရ သည် ဖြစ်၏။ စကြဝဠာ၏ သမိုင်း။ နေစကြာဝဠာ၏သမိုင်း။ ကမ္ဘာမြေကြီး၏သမိုင်း။ ပြီးမှ လူ့သမိုင်း။ လေးဘက်တွား ဘဝမှ ခြေနှစ်ချောင်းပေါ် မတ်မတ်ရပ်နိုင်သည်အထိ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ အံ့မခန်းထွန်းကားမှုများမှ တဆင့်...
စာဖတ်သမားသို့ / စာအုပ်အတွက် ၊ ဆရာ ဒေါက်တာဇော်စိုး၏ စာရေးသူအတွက် အမှာစာ။ မင်းသေ့ ……. နာမည်အရင်းက အောင်ကိုကိုတိုး …. စာရေးဆရာဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ထိုက်တန်သူ…. စာရေးခြင်းအလုပ်ကို တပ်မက်သူ ….. စာပေလောကမှာ နေရာတစ်နေရာဆုတ်ကိုင် ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ……. ပြီးတော့ ….. ထူးပြီးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုသူ …….။ လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်က… မန္တလေးတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနက...